नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (NIB) ले गर्यो चमत्कार, खुद मुनाफा नै रू. दुई अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ
April 25, 2018 Aagan Post0Comments
काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (NIB) ले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा रू. दुई अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा खुद नाफा १९.३८ प्रतिशतले बढी हो ।
बैङ्कले सो अवधिमा निक्षेप संकलन रू. एक खर्ब ३० अर्ब निक्षेप संकलन गरेर एक खर्ब १८ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ । समिक्षा अवधिमा बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. १० अर्ब बढी रहेको छ भने जगेडा कोष रू.१० अर्ब बढी रहेको छ । बैङ्कको खुद ब्याज आम्दानी ४ अर्ब १५ करोड बढी रहेको छ, अघिल्लो बर्ष यहि अबधिमा करिब रु.३ अर्ब ४७ करोड बढी रहेको थियो । ब्याज आम्दानी, सञ्चालन मुनाफा आएको सुधार ले नै बैंक लाई प्रगति पथमा पुर्याएको हो ।
बैङ्कको सञ्चालन मुनाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा रु. २९ करोड बढी रहेको छ, चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा रु. ३ अर्ब ७५ करोड रुपैया रहेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा ०.६४ % बाट बढेर ०.७६ प्रतिशत रहेको छ । बैङ्कको सिडी रेशियो ७८.०३ % रहेको छ भने प्रति शेयर आम्दानी रु.३५.५५ रहेको छ ।
← नेपाल सेवा लघुवित्तको एक करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपिओ) निष्कासन
बुध्दले थप्दै छ फेरि नयाँ विमान →
अर्थमन्त्रीले शेयर बजार र घरजग्गामा जाने कर्जा अनुत्पादक भनेपछि आज नेप्सेमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
कालिका पावरको ६ लाख कित्ता साधारण सेयर बाडफाड, ४ जना बाहेक सबैलाई शेयर
नेपाल सेवा लघुवित्तले साधारण सेयर (आईपिओ) जारी गर्न पायो स्वीकृत, कति कित्ता जान्नुहोस
April 3, 2018 Aagan Post 0